Is-afgarad laga gaaray xiisad ka jirtay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandIs-afgarad laga gaaray xiisad ka jirtay magaalada Boosaaso
November 16, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. [Lahaanshaha Sawirka: Cali Ducaale]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Is-afgarad ayaa laga gaaray xiisad ka jirtay magaalada Boosaaso, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Xiisada ayaa timid kadib markii asbuucii lasoo dhaafay ay magaalada galeen maleeshiyo beeleed ka timid magaalada Carmo ee gobolka Bari.
Maleeshiyada ayaa la sheegay in ay adeegsanayaan qandaraas qaatayaal ay isku haybyihiin kuwaasoo ka xanaaqsan khilaaf ka dhashay shirkad la yiraahdo PDG oo saadka siisa ciidamada badda Puntland ee ay maalgeliyaan Isutaga Imaaraatka Carabta.
Isimada iyo culimada ayaa hormuud u ahaa dadaalada lagu qaboojinayo xiisada oo laga baqay in ay keento gacan ka hadal u dhaxeeya maleeshiyo beeleedka iyo dowladda Puntland oo ciidamo faro badan oo wata gaadiidka dagaalka geysay magaalada Boosaaso.
Dhexdhexaadiyaasha ayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ka codsaday in dowladda aysan samayn wax keeni kara isku dhac taas badalkeedana hoggaamiyaasha maleeshiyada ay ogolaadeen in ay ka baxaan magaalada kadibna wixii khilaaf ah oo jira lagu xaliyo wadahadal, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
February 23, 2019 Madaxweyne Deni oo kormeeray ciidamada difaaca Puntland oo ku sugan xerada 54-aad ee Garoowe
Lionel Messi ayaa iclaamiyay inuu ka fariistay waajibaadka qaranka ee ciyaaraha caalamiga ah kadib markii gool ku laad uu khasaariyay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka America. “Waxay igu tahay wax aan la aqbali [...]
At least four people, including two security guards, were killed in an explosion outside the Prophet’s Mosque in Saudi Arabia’s Medina, according to the sources. Pictures on social media show smoke billowing from a fire [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ka codsaday raysulwasaaraha cusub in uu dib u eegis ku sameeyo golihiisa wasiiradda oo uu dhawaan soo dhisay kadib markii ku dhawaad 100 xildhibaan ay soo [...]